NETFLIX ရှိ BIKRAM ယောဂမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်သည် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသော ချေမှုန်းရေးစွပ်စွဲချက်များကို ကြည့်ရှုသည်။ - အမှိုက်
သတင်း ဘဝ တခြား ဆင်ခြေ လမ်းညွှန်များ အမှိုက်
Netflix ၏ Bikram ယောဂမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်သည် စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည့် စွပ်စွဲချက်များကို ကြည့်ရှုသည်။
အဓိက / အမှိုက်
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က Netflix သည် Bikram Yoga တည်ထောင်သူအား လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျင့်ပျက်ခြစားမှုစွပ်စွဲချက်များအကြောင်း မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်အသစ်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ နာရီဝက်ရှိုးသည် သူ၏ ပူပြင်းသော ယောဂအင်ပါယာနှင့် Bikram Choudhury ကို ဆန့်ကျင်သည့် တောင်းဆိုချက်များကို ကြည့်ရှုသည်။
မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်သည် သူ၏အင်ပါယာကို မည်ကဲ့သို့တည်ဆောက်ခဲ့ပုံနှင့် သူ့အပေါ်စွပ်စွဲချက်များအား ကြည့်ရှုသည်။ ၎င်းသည် ၎င်းတို့အား ဂျာနယ်လစ်များ နှင့် Bikram Choudhury နှင့် နီးစပ်သူ များအား စော်ကားသည်ဟု ပြောဆိုသည့် အမျိုးသမီးများနှင့် အင်တာဗျူးများ ပါရှိသည်။
TW- ဤဆောင်းပါးတွင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု စွပ်စွဲချက်များ ပါဝင်ပါသည်။
ဤဆောင်းပါးတွင် Netflix ရှိ Bikram- Yogi၊ Guru၊ Predator အတွက် ငေးမောစရာအချို့ ပါရှိသည်။
Bikram ယောဂဆိုတာ ဘာလဲ၊ Bikram Choudhury ဆိုတာ ဘယ်သူလဲ။
Bikram Yoga သည် ကိုယ်ဟန်အနေအထား ၂၆ ခုနှင့် အသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်း နှစ်ခုဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် ယောဂပုံစံဖြစ်သည်။ စာသင်ခန်းများသည် ပူပြင်းသောအခန်းများတွင် ကျင်းပကြပြီး သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို လုံးဝကန့်သတ်ချက်သို့ တွန်းပို့ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ Bikram Choudhury သည် ဤစတိုင်လ်ကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီး စီးရီးများကို မူပိုင်ခွင့်တင်ရန်ပင် ကြိုးစားခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
အတန်းထဲတွင် လူ ၅၀၀ အထိ လက်ခံကျင်းပပေးသည့် ဟိုတယ်များတွင် မကြာခဏ ယောဂဆရာ လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများ ကျင်းပလေ့ရှိသည်။ သင်တန်းကြေးမှာ ၁၀၀၀၀ ကျပ်ဖြစ်သည်။ ဒါက သူ့ကို သူ့ရဲ့ကျော်ကြားတဲ့ လူနေမှုပုံစံနဲ့ နေထိုင်နိုင်စေခဲ့တာ၊ ဂန္ထဝင်ကားတွေ မောင်းနှင်တာ၊ ဈေးကြီးတဲ့ နာရီတွေဝတ်ပြီး Beverly Hills မှာ နေထိုင်ခွင့်ရခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Bikram Choudhury သည် မကြာမီ ယောဂ၏ လူဆိုးလေးဟု နာမည်ပြောင်ရခဲ့ပြီး ၎င်း၏ ယောဂကျင့်ထုံးများသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ လူ ဘီလီယံဝက်ကျော်ကို ထိခိုက်စေခဲ့သည်ဟု ဆိုခဲ့သည်။
ကျောင်းသားများသည် သူ့အား အထင်ကြီးလောက်သော ဘုရားတစ်ဆူရှိခဲ့ပြီး ယောဂလောကရှိ အရာအားလုံးကို သိမြင်လာခဲ့သည်။ သူသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ယောဂချန်ပီယံတစ်ဦးဟု အခိုင်အမာဆိုသော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် ယင်းပြိုင်ပွဲအမျိုးအစားများပင် မရှိခဲ့ကြောင်း မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ မူပိုင်ခွင့်ရရန် ကြိုးစားခဲ့သည့် ကိုယ်ဟန်အနေအထား ၂၆ ခုနှင့် အသက်ရှုလေ့ကျင့်ခန်း နှစ်ခုကို သူကိုယ်တိုင်ပင် ဖန်တီးထားခြင်း မရှိပါ။ သူ၏ အင်ပါယာ တစ်ခုလုံးသည် အလိမ်အညာများကို အခြေခံထားသည်။
လူတွေကို tinder မှာ ဘယ်လို သတင်းပို့ရမလဲ
Netflix ရှိ Bikram ယောဂမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကား အဘယ်နည်း။
မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တွင် Bikram ယောဂ ထွန်းကားလာမှုနှင့် Bikram Choudhury သည် သူ၏ ပူပြင်းသော ယောဂအင်ပါယာကို ဖန်တီးပုံတို့ကို ခြုံငုံထားသည်။ ၎င်းသည် သူ၏အမည်အောက်တွင် သင်ကြားလိုသော ယောဂဆရာများကို သင်ကြားပေးမည့် အတန်းများအတိုင်းဖြစ်သည်။
ထို့နောက် သူနှင့်ပတ်သက်သော လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုဆိုင်ရာ အခိုင်အမာပြောဆိုမှုများ စတင်ပေါ်ပေါက်လာသောအခါ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကို စူးစမ်းလေ့လာသွားပါမည်။ Choudhury က သူတို့အဲဒီမှာ ရှိနေစဉ်အတွင်း သူ့ရဲ့ဆရာ လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းက အမျိုးသမီးက သူတို့ကို စော်ကားခဲ့တယ်လို့ စွပ်စွဲခဲ့ပါတယ်။
ရှိုးအတွက် Netflix အကျဉ်းချုပ်က ဤသို့ဆိုသည်- ဤမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်သည် သူ၏ကမ္ဘာ့အင်ပါယာကို မွေးဖွားလာပြီး စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာများ ပေါ်ထွန်းလာသည်နှင့်အမျှ ပူပြင်းသောယောဂတည်ထောင်သူ Bikram Choudhury ၏ မြင့်တက်လာမှုနှင့် ပြိုလဲမှုတို့ကို ဇယားကွက်များဖော်ပြသည်။
မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကို ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်ကြောင်း အမျိုးအစားခွဲခြားထားပြီး တစ်နာရီ ၂၆ မိနစ်ကြာမြင့်သည်။
Choudhury ၏ မာစတာအတန်းအစားများသည် ဟိုတယ်များတွင် မကြာခဏ ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်ဟု မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ ကျောင်းသားများသည် အနီးနားတွင် အိမ်တစ်လုံးရှိသော်လည်း Choudhury ကိုယ်တိုင်က Presidential Suite တွင် နေထိုင်သည့် ကျောင်းသားများသည် ဟိုတယ်များတွင် ကိုးပတ်ကြာ နေထိုင်ကြသည်။
မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တွင် Bikram Choudhury ကိုစွပ်စွဲထားသည့်အမျိုးသမီးအချို့နှင့် ၎င်း၏လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများတွင် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ၊ သူနှင့်သူ၏ရေးရာအကြီးအကဲဖြစ်သူတို့ကို လေ့လာခဲ့သည့် သတင်းထောက်များနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုများပါရှိသည်။
မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တွင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးမှာ Sarah Baughn ဖြစ်သည်။ သူမသည် အတန်းထဲတွင် လေးရက်မြောက်နေ့တွင် သူမကို Choudhury ၏ရုံးခန်းသို့ ခေါ်သွားသည်- ငါတို့အတွက် ဘာလုပ်ပေးမှာလဲ? ဒါကို ငါတို့က ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရမလား။ သူမသည် ဆေးခန်းအတွင်း ကိုယ်ဟန်အနေအထား မသင့်လျော်စွာ ပြုမူပြီး ဟိုတယ်ခန်းတွင် နှိပ်စက်ညှင်းပန်းခဲ့ကြောင်း သူမက စွပ်စွဲခဲ့သည်။
ကျွန်တော်တို့အားလုံး Bikram နဲ့ နောက်ကျမှ အိပ်ဖို့ မျှော်လင့်ခဲ့ကြတယ်လို့ Sarah က ရှင်းပြပါတယ်။ တခါတရံ မနက် ၃ နာရီမှာ 'မင်းဘယ်မှာလဲ' လို့ ခေါ်တယ်။ ငါ့အခန်းကိုလာခဲ့၊ ငါအထီးကျန်ဆန်တဲ့ကုမ္ပဏီလိုတယ်' ရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်။
အခြားယောဂဆရာ Larissa Anderson သည် သူမ၏ကိုယ်ပိုင်စတူဒီယိုရှိရန် အိပ်မက်မက်ခဲ့သည်။ သူမကို Bikram ၏ Beverly Hills နေအိမ်သို့ ဖိတ်ကြားခဲ့သည်။ သူမထွက်ခွာမီ နှစ်ညတွင် Bikram သည် ဘောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်တစ်ခုကို စတင်ခဲ့ပြီး Larissa သည် သူ့ကို စတင်အနှိပ်ခံခဲ့သည်။ သူမကို စပြီးနမ်းတယ်လို့ စွပ်စွဲပြီး ဆွဲထုတ်ပစ်လိုက်တယ်။
ထို့နောက် သူမအား တောင်းပန်မည်ဟု ထင်ကာ အခြားအခန်းသို့ ခေါ်သွားကာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားခဲ့သည်။
ကျောင်းသားများသည် ယောဂသင်ကြားရေးလောကတွင် အောင်မြင်လိုပါက အဖြစ်အပျက်များပြီးနောက် ဆရာအတတ်သင်သင်တန်းများသို့ ပြန်သွားရန်မှလွဲ၍ ရွေးချယ်စရာမရှိဟု ယူဆကြသည်။ Bikram ၏အမည်အောက်တွင် နှီးနှောဖလှယ်ပွဲများနှင့် အတန်းများကျင်းပနိုင်သည့် ထိပ်တန်းဆရာများစာရင်းတွင် ပါ၀င်ချင်ကြသည်။ ထုတ်ပြောရင် သူတို့က ကျွမ်းကျင်စွာ ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးလိမ့်မယ်။
Sarah ရဲ့သမီးက ယောဂဆရာမတစ်ယောက်အနေနဲ့ သူ့အမေရဲ့ခြေရာကို လိုက်ချင်တယ်လို့ ပြောလာတဲ့အခါ Sarah က သူထွက်ပြောဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ Bikram Choudhury ကတော့ စွပ်စွဲချက်တွေကို ငြင်းဆိုထားပါတယ်။
မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တွင် Kim Kardashian နှင့် George Clooney ကဲ့သို့သော နာမည်ကြီး ယောဂကျင့်စဉ်များနှင့် Bikram ၏ သွန်သင်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ အင်တာဗျူးများတွင် ပြောနေပါသည်။
အမျိုးသမီး ဒါဇင်ဝက်ကျော်က လာကြည့်ကြပေမယ့် မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ထဲက အင်တာဗျူးသူတွေကတော့ သူစော်ကားတဲ့ အမျိုးသမီးအရေအတွက်က အများကြီးပိုများတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
Bikram သည် တိုင်းပြည်မှ ထွက်ပြေးခဲ့သည်။ ခရိုင်ရှေ့နေနှင့် LAPD တို့သည် Netflix မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်အတွက် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းကို ငြင်းဆိုခဲ့သည်။
အခု Bikram Choudhury ဘယ်မှာလဲ။
မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်၏အဆုံးတွင်၊ Bikram Choudhury သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိအတန်းများကိုသင်ကြားနေဆဲဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားသည်။ သူသည် အမေရိကန်တွင် တရားခံပြေးအဖြစ် ဆက်လက်ရှိနေသော်လည်း ရာဇ၀တ်မှု သို့မဟုတ် တရားခံလွှဲပြောင်းရေး ဝရမ်းထုတ်ထားခြင်း မရှိသေးပေ။ သူသည် 2018 တွင်မက္ကဆီကိုတွင်သင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးပြီး 2019 တွင်စပိန်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
မုဒိမ်းမှု ၆ မှုကို အရပ်ဘက်တရားရုံးများတွင် တရားစွဲဆိုထားသည်။ ၎င်းတို့ထဲမှ လေးခုကို ဖြေရှင်းပြီးဖြစ်သည်- ၎င်းတို့ထဲမှ နှစ်ဦးမှာ Sarah နှင့် Larissa ၏အမှုဖြစ်သည်။
အပေါ်မှာ နောက်ဆုံးတင်ထားတာ Bikram Yoga Instagram စာမျက်နှာ ဖေဖော်ဝါရီလက ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် သူ့နာမည်ရဲ့ hashtag မှာ ရှာကြည့်မယ်ဆိုရင် ယောဂ လွှမ်းမိုးသူတွေက သူနဲ့အတူ ဓာတ်ပုံတွေ တင်နေကြဆဲပါပဲ။
Instagram မှတဆင့် @patrymontero
ဒီပုံကို ယောဂချစ်သူ Patricia Montero က ဒီနှစ် ဇွန်လမှာ တင်ခဲ့တာပါ။ သူမကို စိစစ်ပြီး 559k follower ရှိတယ်။ ဓာတ်ပုံတွင် မှတ်ချက်များ ပါဝင်သည်- ????? ကျေးဇူးပြုပြီး ဒီလူကို မထောက်ခံပါနဲ့။
Bikram: Yogi၊ Guru၊ Predator အတွက် နမူနာကို ဤနေရာတွင် ကြည့်ရှုပါ။
Bikram- Yogi၊ Guru၊ Predator သည် ယခု Netflix တွင် တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။
ဤစာရေးဆရာမှ အကြံပြုထားသော ဆက်စပ်ဇာတ်လမ်းများ
• Netflix doc 'The Game Changers' သည် ကြည့်ရှုသူများကို ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်စေသည်မှာ မ ဟုတ်ပါဘူး။
• နောက်ဆုံးထွက် Netflix စစ်မှန်သောရာဇ၀တ်မှုသည် လူသတ်မှု 600 ကိုဝန်ခံခဲ့သောအမျိုးသားတစ်ဦးအကြောင်းဖြစ်သည်။
• Netflix ၏ The Devil Next Door သည် 'ခြောက်ခြားဖွယ်ကောင်း' နှင့် 'အကောင်းဆုံးရာဇ၀တ်မှု' ဖြစ်သည်
Notts Uni မှာ မစတင်ခင် သိလိုတဲ့အရာများ
Netflix ရှိ Dash နှင့် Lily ၏ဆယ်ကျော်သက်သရုပ်ဆောင်များသည် လက်တွေ့ဘဝတွင် အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ။
ပထမဆုံး ဆောင်းရာသီ Love Island ပြိုင်ပွဲဝင် နှစ်ဦးကို 'အတည်ပြု' လိုက်ပါပြီ
ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်- Ms Dynamite သည် SSB ၏ ခေါင်းစီးကို ဖော်ပြမည်ဖြစ်သည်။
အသက် 24 နှစ်အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦး သေဆုံးပြီးနောက် ဆန္ဒပြသူများသည် Cardiff Bay ရဲစခန်း အပြင်ဘက်တွင် စုဝေးခဲ့ကြသည်။
စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဇာတ်လမ်းများ, ဖက်ရှင်, Nightlife, Guiltlife, လမ်းညွှန်စာအုပ်များ, ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း, အားကစားစာအုပ်များ, ကျောင်းသားများကို ဦး ဆောင်တက္ကသိုလ်များကရေးသားထားသောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း,
'သူက arsehole!'- Wodders the emu ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာကို စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု
ငါ အန်ကာရာလား။ ရပါတယ်ကျေးဇူးပါ။
ခွဲထွက်ခြင်း တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ 'BLOCKADE' uni ဘဏ္ဍာရေးရုံး
Copyright 2022| cityresorthotelmill.nl | ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ